बैशाख ५ गतेबाट उदाउँदैछ शुक्र, यी राशीको भाग्य बलियो ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/बैशाख ५ गतेबाट उदाउँदैछ शुक्र, यी राशीको भाग्य बलियो !
बैशाख ५ गतेबाट उदाउँदैछ शुक्र, यी राशीको भाग्य बलियो !
शुक्र ग्रह सौर्य मण्डलमा सूर्यबाट दोस्रो ग्रह हो। यस ग्रहको सतह चट्टानले बनेको छ र यसको वायुमण्डल कार्बन्डाईअक्साइड् र बिषालू सल्फ्युरिक् एसिडले बनेको हुन्छ।
पृथ्वीको सामान्य तापक्रममा सल्फ्युरिक् एसिड तरल अवस्थामा हुन्छ तर शुक्र ग्रह यती तातो छ की शुक्र ग्रहमा भएको सल्फ्युरिक एसिड वाष्पीकरण भएर ग्यासको रूपमा पाइन्छ।
हरित गृह प्रभावका कारण यो ग्रह सौर्य परिवारको सबै भन्दा तातो ग्रह बनेको छ जसका कारण पृथ्वीमा बस्ने कुनै पनि सजीव वस्तु त्यहाँ जीवित रहने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। यसको वायुमण्डलमा रहेको बाक्लो बादलका कारण यस ग्रहको सतह राडारको सहायताले मात्र पहिल्याउन सकिन्छ।
पृथ्वीको व्यास १२ हजार आठ सय किलोमिटर छ भने शुक्रको व्यास १२ हजार १०२ किलोमिटर छ । शुक्र ग्रह सूर्यबाट १० करोड ८२ लाख आठ हजार नौ सय किलोमिटरको दूरीमा रहन्छ । यसले सूर्यलाई एक पटक घुम्न आठ महिना अथवा २२४ दिन १६ घण्टा लगाउँछ । सूर्यबाट नजिकाएको हुनाले यसको सूर्यपट्टि फर्केको सतह निकै तातो हुन्छ ।
शुक्र ग्रह पृथ्वीको आकाशबाट प्रायजसो सधैं देखिन्छ तर बिहान सबेरै र सूर्यास्तको केही क्षण पछि राम्रो सँग देखिन्छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट आकाशमा देखिने वस्तु मध्ये सूर्य र चन्द्रमा पछिको सबै भन्दा चम्किलो वस्तु हो। यसलाई कहिले काहीँ पर्ता तारा र the “Evening Star” पनि भनिन्छ किन भनेँ यो ग्रह प्रायजसो यी नै समयमा देखा पर्छ र जबसम्म दूरदर्शकयन्त्रको प्रयोग गरिँदैन तब सम्म यो ग्रह तारा जस्तै देखिन्छ।
साँझमा पश्चिम दिशातर्फको आकाशमा अलिक माथि हेरेको खण्डमा निकै चम्किलो आकासिय पिण्ड देखिने छ । एकनासले प्रकाशित भइरहेको त्यो पिण्ड नै शुक्र ग्रह हो । यसरी नै यो ग्रह कहिले सूर्योदयभन्दा अगाडि पूर्वी आकाशमा पनि देखिन्छ । त्यसैले लोकबोलीमा यसलाई बिहानी तारा पनि भनिन्छ ।
बैशाख ५ गतेदेखि सुर्य उदय हुदैछ । ९ ओटा राशिलाई अत्याधिक फाईदा मिल्नेछ । ती कुन कुन राशि हुन भिडियोमा हेर्नुहोस्